Disiki & Copyright | KUSVIRA
Nhoroondo yeTransgender naDkt Quentin Van Meter
Vabereki Vanokurukura Izvo Zvikoro Zvakachengeteka Gender mazano
Transgender Regret Vhidhiyo NaIvo Ivo Vadzoka Kubva KuVane Transgender Husiku
Dianne Colbert Vhidhiyo Isa Pazvinhu Zvakachengeteka Dzidziso
Vanachiremba, Ex transgenders uye Vemagariro Vatsananguro Vanokurukura Transgender Mawonero
Purofesa John Whitehall Vhidhiyo gumi nembiri yakaiswa paUdiki hweGender Dysphoria
Zvinyorwa zveunyanzvi paTransgender Zvinyorwa
Muzvinafundo John Whithall Professional zvinyorwa paGender Dysphoria
Yakachengeteka Zvikoro Zvirongwa
ZVESE ZVINOTAURA ZVIKORO ZVINHU
Zvikoro Zvakachengeteka Kudzidzisa Zvinhu
Vabereki Vachitaura Nezve Zvikoro Zvakachengeteka Gender Zvirongwa
KUTAURA Vhidhiyo Pazvikoro Zvakachengeteka
Dzidziso Yakavanzika. Terms & Mamiriro
Disiki & Copyright
Tikugashirei webhusaiti yedu. Kana iwe uchiramba uchiongorora uye uchishandisa iyi webhusaiti uri kubvumirana kuti uite uye nekusungwa neinotevera chidimbu, pamwe chete nematemu uye mamiriro ekushandiswa.
Ruzivo rwurimo mu webhusaiti ino ndeye rwemazhinji ruzivo zvinangwa chete uye rwunopihwa na www.mukirana. Patiri kuedza kuchengetedza ruzivo rwuri parizvino uye rwakarurama, isu hatigone kumiririra kana waranti ye chero mhando, kutaura kana kutaura, nezvekuzara, chokwadi, kuvimbika, kukodzera kana kuwanika zvine chekuita newebsite kana ruzivo, zvigadzirwa, masevhisi. , kana mifananidzo inoenderana neiyi iripo pawebhusaiti nechinangwa chero chipi. Chero kuvimba kwako kwaunoisa paruzivo rwakadaro saka zvine njodzi panjodzi yako wega. Iwe unofanirwa kuti uite yako kubvunza kuti uone kana ruzivo kana zvigadzirwa zvakakodzera paunoda kushandisa.
Iyo webhusaiti ine nzvimbo yeMitauro Yekushandura. Hapana mutoro unotorwa nekuda kweizvozvo chero shanduro.
Hapana chiitiko tichange nemhosva nokuda nokurasikirwa chero kana kukuvadza kusanganisira pasina chipingidzo, zvisina kunanga kana dzinokosha kurasikirwa kana kukuvadza, kana kurasikirwa chero kana kukuvadza chero kunobva kurasikirwa mashoko kana purofiti zvisamuka kunze, kana maererano, kushandiswa website iyi .
Kuburikidza newebhusaiti iyi iwe unogona kukwanisa kubatanidza kune mamwe mawebhusaiti asiri pasi pekutonga kwe www.mukirana. Isu hatina wekutonga pamusoro pechisikirwo, zvirimo uye kuwanikwa kweaya mawebhusaiti. Kusanganisira chero kubatana hakuiti kunongedza kana kubvumidza maonero anoratidzwa mukati mavo.
Kwese kuedza kunoitwa kuti webhusaiti irambe ichisimuka zvakanaka. Nekudaro, www.mukirana haitore mutoro we, uye haingave nemhosva, iyo webhusaiti iri kusawanikwa kwenguva pfupi nekuda kwehunyanzvi nyaya dzatisingakwanise kudzora.
Iyi webhusaiti uye zvirimo ndeye copyright ye CAUSE (Kubatanidzwa Pamutemo Asina Kudzivirirwa Dzidzo) - © 2018. Kodzero dzese dzakachengetedzwa.
Chero kugovera kana kubereka kwechimwe chikamu kana zvese zvemukati mune chero fomu zvakarambidzwa kunze kwekutanga. Unogona kudhinda kana kurodha zviri mukati kune yemuno hard disk kune yako pachako uye isiri-yekutengesa yekushandisa chete. Unogona kutevedzera zvimwe zvakatorwa kumunhu wechitatu kuti azvishandise, asi chete kana iwe ukabvuma webhusaiti sosi yezvinyorwa zvacho.
Iwe haugone, kunze kwekunge nemvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa, kugovera kana kutengesa zvakapusa zviri mukati. Iwe haugone kuendesa iyo kana kuichengeta pane chero imwe webhusaiti kana imwe nzira yemagetsi kudzoreredzwa system.
Iyo Google inoshandura nzvimbo paSainzi inogadzira iyo yehistori yemuchina yakatemerwa shanduro isina kuchengetwa muhurongwa hwedu. Informa, vamiririri vedu, uye marezinesi edu havaite humbowo kana waranti chero maererano nekunyatso, kukwana, kana kukodzera kwechinangwa chero cheshanduro. Informa haizopiwi mhosva yekurasikirwa kwega, zviitwa, zvekutaura, kuenderera, kudhanirwa, kudhura, kurasikirwa, kukanganiswa, uye zvimwe zvikwereti chero zvazvakonzera kumuka zvakananga kana zvisina kunangana zvine chekuita nazvo, zvine chekuita nekubuda kubva mukushandurwa kweshanduro. . Kushandisa kwako chinhu ichi kunoenderana neMitemo iyi.
Copyright 2018. CHISANGANO (Coalition Against Against Uncertain Sexual Education) Registered Advocacy Group. Kodzero dzose dzakachengetedzwa
Iyi webhusaiti inoshandisa makiki kuti uvandudze ruzivo rwako. Tichafunga kuti wakanaka neichi, asi unogona kusarudza kana uchida. Cookie settingsACCEPT
Zvinotarisirwa Nguva dzose Inobvumira